Home > Risk Factors for Overweight in early ages: longitudinal design with Spanish Preschoolers > Reader Comments > korest việt nam
N'agbanyeghị otu ụlọ ọrụ azụmaahịa, ụlọ ọrụ ndị na-ejihttps://www.pearltrees.com/korestvn ihe na-emebi ala na-adabere na ha nke ukwuu iji na-arụ ọrụ ịdị ọcha mgbe niile na akụrụngwa, igwe, akụkụ, na ebe ọrụ, ngalaba na-akwọ ụgbọala iji rụọ ọrụ ike ha kachasị elu. Ọ bụ ezie na mkpa ịsacha ma wepụ mmanụ, mmanụ, unyi na ihe ndị ọzọ na-emebi emebi na-apụta ìhè maka ịrụ ọrụ nke ọma, ịhọrọ ndị na-emepụta ihe na-adịghị mma nwere ike ịbụ ahụmahụ na-adịghị mma ma dị ọnụ. Ọtụtụ isi ihe ga - enyere aka ịchọpụta ma onye na - ewepu mmanụ gị na - ebute azụmahịa gị na - enweghị isi, na - ewute.
Ogo adịghị mma ma ọ bụ ngwaahịa dị egwu
Emeputara solvents solvents maka ike, iwepụ ihe mkpofu ndị siri ike ịsacha site na ngwaahịa ịdị ọcha nkịtị. Maka nke a, a na-eji kemịkal kemịkalụ nke ike kemịkalụ maka mkpochapu ihe ndị sitere na Organic. Imirikiti ụlọ ọrụ na-ele nke a anya dị ka uru doro anya iji kpochapụ nsogbu pesky, ma ghara ịhụ ihe kpatara ịgbagha onye na-ehicha ya ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ wepu ya. Ọ bụ ezie na kemịkal dị mkpa maka ndị na-emebi emebi, ụdị kemịkalụ nke ndị na-emepụta ihe mgbaze na-eji abụghị otu. Ndị na-enye ihe na-ajụ iji mmiri nchekwa, dokwara arụ ọrụ dochie ihe ndị dị ize ndụ, n'agbanyeghị etu ọghọm dị na ụlọ ọrụ ahụ si dị, na-akpachapụghị anya na ndị azụmaahịa anaghị akpa ike. Iji chọpụta na ụlọ ọrụ gị anọghị n'ihe ize ndụ nke ikpughe nsị kemikal, họrọ onye na-eweta ngwaahịa nke dabara ụkpụrụ nchekwa nke EPA (Protectionlọ Ọrụ Nchedo Gburugburu Ebe Obibi) na OSHA (Ọrụ Ahụike na Ahụike Ahụike).
Azụmaahịa na-adabere n'ọtụtụ ụzọ nhicha dị ọcha iji jikwaa mkpa akụrụngwa, ihe, na ihe dị iche iche. Ndị na-eweta ngwaahịa nwere ahụmahụ na-amụta site na mmekọrịta dị n'etiti ọtụtụ iri afọ na mmekọrịta https://korest.vndị iche iche, ịmata ngwa ọ bụla pụrụ iche, ọ nwere ike ọ gaghị adabara adaba maka ụdị ihe mgbaze na-ejikarị. Productschọta ngwaahịa dabara adaba maka ngwa ọrụ n'otu n'otu nwere ike ịchekwa azụmaahịa oge na ego nke enwere ike ịfu efu n'ihi mmebi nke ụzọ adịghị mma. Chọọ maka ndị na-eweta ngwaahịa na-enye ụdị nhọrọ ngwaahịa zuru ezu, yabụ ihe ịchọrọ ga-abụ otu ihe dị mkpa ma mekwaara ha, dị ka ha bụụrụ gị. Ndị na-enye nnabata ga-aba uru site na iji ndị ọkachamara zụrụ azụ na ndị chemist iji zaa ajụjụ ọrụaka nke ndị ahịa, yana nka iji wuo usoro omenala mgbe enweghị nke zuru oke. Abụ chemist ekwesịghị ịbụ ihe achọrọ iji zụta ndị wepụrụ mmanụ mmanu. Supportnweta nkwado sitere na onye okacha mara, ọkachamara ọkachamara na-enyere aka belata nchegbu ọ bụla gbasara nchekwa ma ọ bụ ngwa ndị ahịa nwere ike inwe. https://korest.vn/thi-truong-thiet-bi-ve-sinh-trung-quoc
Ihe achọrọ ịtụ ụtụ
Otutu mgbe odi nkpa ime nhicha ebe oru adighi ọcha na abia n’oge kachasi nma. Ọ bụrụ na ihe ọghọm mebie ebe niile ụlọ, azụmahịa na-efunari uru kwa ụbọchị ndị ọrụ enweghị ike iji ohere ahụ. Site na ị na-ahọrọ ndị na-emepụta solvents anaghị egbochi ndị ahịa obere iwu ịchọrọ, ị na-enye azụmahịa gị na nchekwa na udo nke obi ọzọ, n'agbanyeghị etu o si adị